MyJio အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（52.4MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် MyJio: For Everything Jio
Myjio သည် Jio Devices များ, ရုပ်ရှင်, တေးဂီတများ, ဂိမ်းများ, app, အဟိုက်ဆုံးဂီတနှင့်ရုပ်ရှင်များ, ဂိမ်းများနှင့်နောက်ထပ်
•အကောင့်အသေးစိတ်: i အကောင့်အသေးစိတ်: i ။ Balance & အသုံးပြုမှု - ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ, ဒေတာနှင့် SMS များအတွက်ငွေပေးချေမှုနှင့်အသုံးပြုမှုပုံစံများအတွက်အချိန်နှင့်တပြေးညီချိန်ခွင်လျှာလက်ကျန်ငွေသို့မဟုတ်ပမာဏကိုကြည့်ပါ။ II ။ အားသွင်းခြင်း - သင်၏ငွေသွင်းခြင်းအတွက်ပြက္ခဒိန်သတိပေးချက်ကိုရယူပါ။ iii ။ အကောင့်မျိုးစုံ - သင်၏ပရိုဖိုင်းကို သုံး. JIO အကောင့်များကိုအလွယ်တကူချိတ်ဆက်ပြီးစီမံပါ။ Jootununes: သင်၏အဖြစ်အပျက်များကိုသတ်မှတ်သို့မဟုတ်စီမံခြင်း။ တေးဂီတကိုသင်၏စိတ်အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားကြပါစို့။
i ။ ကိုယ်ရေးရာဇ0င်ချိန်ညှိချက်များ - သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းသင်၏အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ငွေပေးချေမှုဆက်တင်များကိုလွယ်ကူစွာစီမံပါ။ ကိရိယာများကိုစီမံခြင်း - သင်၏ Jiofiber ထုတ်ကုန်များကိုလွယ်ကူစွာစီမံပါ။ သင်၏ Jiofiber Wi-Fi ကိုမည်သူဆက်သွယ်သည်ကိုခွင့်ပြုပါ Wi-Fi အမည်များနှင့်စကားဝှက်များကိုစီမံပါ။ III ။ App Language: သင်၏ဘာသာစကားဖြင့်ရနိုင်သည်
i ။ ငွေပေးချေခြင်းနှင့်ပိုက်ဆံအိတ် - သိမ်းဆည်းထားသောကဒ်များ, JioMoney, Paytm နှင့် Phonepe Walkets ဖြင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်လစာနှင့်ငွေပေးချေခြင်း, Jioautopay: အခက်အခဲအခမဲ့ငွေပေးချေမှုအတွက်အလိုအလျောက်ဖွင့်ခြင်း
i ။ ချက်ချင်း resolution အတွက်အင်္ဂလိပ်သို့မဟုတ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူတိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်း
II ။ သင်၏ကွန်ယက်, အားသွင်းခြင်းသို့မဟုတ်အခြားပြ issues နာများကိုဖြေရှင်းခြင်းနှင့်အခြားပြ issues နာများကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်ဖြေလျှော့ပြပေးပါ။ သင်၏စုံစမ်းမှုများအားလုံးကိုပြည့်စုံသောမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများကိုရှာဖွေပါ။ 'Hellojio' floater ကိုအသာပုတ်။ အဖြေများကိုရှာဖွေရန်သင်၏အဆင့်မြင့်အသံလက်ထောက်ကိုအသာပုတ်ပါ, ငွေလွှဲခြင်း, ငှားရန်သို့မဟုတ်သင်၏နို့သမားများသို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားငွေတောင်းခံလွှာများ - တစ်နေရာမှတစ်နေရာမှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးငွေဖြည့်ပါ။ သငျသညျစျေးဝယ်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေစွာ scan နှင့်အဆင်ပြေစွာပေးဆောင်။ သင်၏အရောင်းအ0ယ်များအားလုံးသည် UPI PINK
မယုံကြည်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းဖြင့်အကောင်းဆုံးအပေးအယူများ, သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ချက်အတွက်ဖြေရှင်းနည်း။ ဆရာဝန်များနှင့်ဗီဒီယိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများ, Home-home labor lab စစ်ဆေးမှုများ, ကာကွယ်ဆေးရှာဖွေသောဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုများနှင့်ပိုမိုကာကွယ်ဆေး, လုံခြုံစိတ်ချရသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများနှင့်အခြား။
သီချင်း 45 သန်းကျော်ဂီတစာကြည့်တိုက်ကိုစူးစမ်းလေ့လာပါ။ စိတ်ဓာတ်တိုင်းအတွက်တေးဂီတကိုနှစ်သက်ပါ။ ပျော်ရွှင်ခြင်း, အပြာရောင်သို့မဟုတ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ခံစားရသည်။
i ။ မူလစာမျက်နှာ - ထိပ်တန်းသတင်းရင်းမြစ်များမှဘာသာစကား 13 မျိုးဖြင့်သတင်းကိုချိုးဖောက်ခြင်းနှင့် E-Papers 250 သို့အခမဲ့0င်ရောက်နိုင်ခြင်း။ မဂ္ဂဇင်း - နိုင်ငံရေး, ဖျော်ဖြေရေး, စီးပွားရေး, နည်းပညာ, နည်းပညာ, ငွေ, အလုပ်, အလုပ်များ, အလုပ်များ, ကျန်းမာရေး, ဗွီဒီယိုများ - ဘောလီးဝုဒ်, ဖက်ရှင်, ကျန်းမာရေး, နည်းပညာ, အားကစား, Live TV: Live TV: Live News နှင့်ဗွီဒီယိုများကိုချန်နယ် 190 မှကြည့်ပါ။ • JioCinema
blockbusters, နောက်ဆုံးပေါ် tv subs, သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော TV အစီအစဉ်များ, : ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောဂိမ်းများကိုကစားခြင်း, ဉာဏ်စမ်းပဟေ in ိများတွင်ပါ0င်ပါ။
•သင်၏ဓါတ်ပုံများ, ဗွီဒီယိုများ, အသံ, အဆက်အသွယ်များ, အဆက်အသွယ်များနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုအရန်ကူးယူခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုရယူပါ။ မဂ္ဂဇင်းများမှကျန်းမာရေးအကြံပေးချက်များမှအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာခြင်းနှင့်ငါးများနှင့်မဂ္ဂဇင်း 80 မှဗီဒီယိုများနှင့်စာဖတ်ခြင်း သင့်လက်ချောင်းထိပ်မှာ။ တိုင်းဂိမ်းတွေနဲ့သီးသန့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုရယူပါ!
ဈ။ Discover အစိုးရလူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်များ, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ကိုယ်အဘို့အလုပ်အကိုင်များ, မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အခြားသူများ ii
iii အရည်အချင်းပြည့်မီ Check နှင့်လျှောက်ထားဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်နှင့်အမျိုးမျိုးသောပြည်နယ်နှင့်ဗဟိုအစိုးရအစီအစဉ်များအတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ။
•မ Jio အပေါ်သေးသော (G2C) နိုင်ငံသားရန်အစိုးရအပေါ်အမှန်တကယ်အချိန်နှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်အသိပေးချက်များကိုရယူပါ။ get SIM ကဒ်သို့မဟုတ် JioFiber: Jio သို့အသစ်တခု Jio SIM ကဒ်သို့မဟုတ် port ကို Get သို့မဟုတ်သင့် JioFiber ကွန်နက်ရှင်စာအုပ်ဆိုင်
ii ။ track အလို့ငှာ: သင်၏ Jio အမိန့် iii
၏ status သိမှတ်ကြလော့။ လျင်မြန်စွာအားပြန်သွင်းနိုင် / ငွေပေးချေမှုရမည့်: အားပြန်သွင်းနိုင်သို့မဟုတ်လစာဥပဒေကြမ်းများဆို Jio အရေအတွက်ကို
JioInteract: Talk ကို JioInteract, ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး AI အ based ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပလက်ဖောင်း
• Universal အပေါ်နာမည်ကြီးတွေမှ QR:
Link ကိုအဆက်အသွယ်မှတပါးအကောင့်အများကြီးပိုစမတ်ဖို့အတွက် QR ကင်နာနှင့်အတူ။